उत्कृष्ट विषयवस्तु र बुलन्द सामाजिक सन्देश छ “रामप्यारी”मा : रेखा थापा – Pahilo Page
उत्कृष्ट विषयवस्तु र बुलन्द सामाजिक सन्देश छ “रामप्यारी”मा : रेखा थापा
रेखा थापा नेपाली चलचित्र उद्योगमा कसैले परिचय गराइरहनुपर्ने नाम होइन । फिल्ममा डेब्यु गरेदेखि नै एकपछि अर्को गर्दै लगातार सुपरहिट चलचित्रहरु नेपाली दर्शकमाझ पस्किदै आएकी रेखा यतिबेला आफ्नो आगामी चलचित्र “रामप्यारी”को प्रचारप्रसार र समाजसेवामा व्यस्त छिन् । बच्चादेखि बृद्धसम्म, गाउँदेखि शहरसम्म जोकोहीले नायिकाको रुपमा चिन्ने नाम कुनै छ भने त्यो रेखा थापा नै हो । यहाँ प्रस्तुत छ, यही चैत २६ गतेदेखि देशव्यापी प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको रेखाको नयाँ चलचित्र “रामप्यारी”को सेरोफेरोमा रहेर पहिलोपेज डटकमका सम्पादक उदय जीएमले नायिका रेखा थापासँग गरेको कुराकानी :
पहिलोपेज : तपाईंको पछिल्लो चलचित्र “रामप्यारी” यही चैत २६ गतेदेखि देशव्यापी प्रदर्शनको पर्खाइमा छ ? यतिबेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
रेखा : हो नारी शक्तिको पर्याय “रामप्यारी” दबिएर रहेका महिलाहरुको मात्र होइन समाजमा रहेका हर किसिमका कुरीति, कुसंस्कार, समाजिक तथा राजनीतिक अपराधको विषयमा पनि जोड्दार रुपले डटेर लड्छे । आवाजहीनहरुको आवाज बुलन्द गर्छे । रामप्यारीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नयाँ आयाम दिन खोज्दै छे । चैत (२६ मा रिलिज हुँदैछ । र, म अहिले “रामप्यारी”कै प्रचारप्रसार एवम् सामाजिक काममा पनि व्यस्त छु ।
पहिलोपेज : “रामप्यारी”मा महिला टेम्पोचालकको संघर्षगाथा र विषयवस्तु रहेको सुनियो ? महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय र सफल छन् भन्ने “रामप्यारी”को सन्देश हो ?
रेखा : हो । मैले दिने खोजेको सन्देश नै महिलाहरु हर क्षेत्रमा सफल छन् भन्ने नै हो । अहिले नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुख महिला नै हुनुहुन्छ । अब बन्ने नयाँ प्रधान न्यायाधीश पनि महिला हुने भएकोले यो त थोरधेरै पुष्टि भएकै छ । तर पनि ग्राउन्ड लेबलमा हेर्ने हो भने महिलाको समस्या त हजुरहरुलाई अवगत नै छ । विश्वमा दोस्रो दर्जाको मानिसको रुपमा जीवन काट्न बाध्य अर्वौं महिलाहरुलाई पहिलो दर्जाको मानिसको जीवन स्वतन्त्र, स्वाभिमानी जीवन काट्ने वातावरण अहिले नि बन्न सकेको छैन । चलचित्रको माध्यमबाट यसलाई चिर्ने मेरो प्रयास हो । मुख्यतः यस चलचित्रमा २० हजारको जागिरको लोभमा महिलाहरु खाडी मुलुकमा बेचिनु भन्दा २० र ३० हजारको जागिर त हामी यसै पनि यहीँ सिर्जना गर्न सक्छांै । त्यत्ति हो, कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । रामप्यारीले चलचित्रको माध्यमबाट काम भन्ने कुरा सानो वा ठूलो हुँदैन । स्वाभिमान ठूलो हो भन्ने सन्देश दिन खोज्छे । मलाई लाग्छ मुभीले प्रभाव पार्छ ।
पहिलोपेज : रेखा थापाका पहिलेका चलचित्रहरुलाई निर्देशक छवि ओझाका कारणले चलेका भन्ने गरिन्थ्यो । उहाँसँगको सम्बन्ध टुङ्गिएपछि रेखा फिल्मस्को ब्यानरमा बनेका “काली” र “हिम्मतवाली” पनि उत्तिकै हिट भए । प्रदर्शन मितिकै संघारमा उभिएर भन्नुपर्दा “रामप्यारी” सफल हुन्छ भन्ने आधारहरु के छन् ?
रेखा : छविजी मेरो निकै आदरणीय अभिभावक हो । तर, उहाँको कारणले मात्रै रेखा फिल्मस चलेको हो भन्ने तर्कलाई त “काली” र “हिम्मतवाली”ले जवाफ दिइसक्यो नि । जहाँसम्म “रामप्यारी” किन सफल हुन्छ भन्ने कुरा छ । पहिलो कुरा त रामप्यारी रेखा वा रेखा फिल्मस्को मात्रै फिल्म होइन । म यो मान्छु कि यो त आम दर्शकको फिल्म हो । दर्शकको फिल्म न चलेर अरुको चल्ने कुरा आएन । दोस्रो, रेखा फिल्मस् ब्यानरको चलचित्र हो । यो ब्यानरमा नचल्ने मुभी बनाएको सायद इतिहास छैन । तेस्रो, म फिल्म रहरको लागि बनाउँदैन । यति धेरै वर्ष, यतै धेरै मुभी खेलिसकेको रेखालाई अब मुभी खेल्ने रहर नि पुग्यो होला । तर यस मानेमा म मुभी बनाउछु कि उत्कृष्ट कन्टेन्ट र ऊर्जाशील शक्ति र बुलन्द सामाजिक सन्देश दिन अहिले पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । र, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न दर्शकहरु मुभी बनाऊ प्यारी भन्नुहुन्छ । उहाँहरुको मुभी नचले कसको चल्छ ? यसको सामाजिक विषयवस्तुलाई लिएर महिनौंसम्म छलफल गरेर कोरिएको स्क्रिप्ट, प्रेजेन्टेशन, हामी सबै कलाकारको अथाह मेहनत र सविर श्रेष्ठको उत्कृष्ट निर्देशन यसका प्लस प्वाइन्टहरु हुन् ।
पहिलोपेज : हरेक चलचित्रमा नयाँ हिरोलाई डेब्यू गराउने हिरोइनमा रेखा थापाको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । “रामप्यारी”मा पनि नयाँ हिरोको पदार्पण हुँदैछ, आभास अधिकारीको । दिदीको छोरालाई हिरो बनाउनलाई हो कि आभासको अभिनय क्षमता देखेर ?
रेखा : आभास मात्र मेरो आफ्नो मान्छे होइन । आभास भन्दा गुड लुकिङ भएका मेरा आफ्ना मान्छे टन्नै हुनुहुन्छ । मैले जति पनि अगाडि ल्याएका कलाकारहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु उत्कृष्ट नायक बनेर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा छाएको तपाईहरुलाई थाहा नै छ । जहाँसम्म आभासको कुरा छ, हरेक हाम्रो चलचित्रमा सहभागी हुने गर्दछ । उसले एक किसिमको घरमै क्लास जस्तो ल्याइरह्यो । हरेक मिटिङमा उसले ध्यान दिएर सुन्ने गथ्र्यो । उसले प्रसिद्ध गुरुकूलका नाट्यगुरु सुनिल पोखरेलसँग अभिनयको क्लास पनि लिँदै आएको थियो । हिजो मात्र सुरु भएको विलियम शेक्सपियरको नाटक “मिड नाइट समर सपान ड्रिम”मा सुनिल पोख्रेलजीसँगै “किरण”को मुख्य भूमिकामा नाटक गर्दै आएको छ । उसमा कला भएर लिएको हो । गला नभए त गीत पनि कहाँ राम्रो सुनिन्छ र ?
पहिलोपेज : “रामप्यारी”मा रेखा थापाका दुईवटा भूमिका रहेको यसको प्रचार सामग्रीबाट देख्न सकिन्छ । एउटा टेम्पोचालक र अर्को राम । यी दुईको भूमिका के हुन् ?
रेखा : प्यारी ट्याम्पु ड्राइभर छे । उसले स्वभिमानले नै आफ्नै देशमा पसिना चुहाएर, आफ्नै बल बुताले, आफ्नै पसिनाले पेटको भोक मेट्छे । राम सशस्त्र भूमिकामा छे । ऊ समाजका हरेक अपराध र अन्याय विरुद्ध लड्छे । बाँकी मुभी हेरेसी थाहा पाउनु हुन्छ । इन्टेरेस्टिङ छ कहानी । अहिले पनि यसो मुभीबारे मनमनै समीक्षा गर्दा मुभी उत्कृष्ट बनेको लाग्छ । यसले नयाँ ह्वीम ल्याउँछ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ।
पहिलोपेज : रेखाकै दुई/दुईवटा भूमिका रहेको “रामप्यारी”मा आभास र आश्मा डीसीको भूमिका कहाँनेर के छ नि ?
रेखा : आभास र आश्माको निकै रोमाञ्चक प्रेम केमिस्ट्री छ । सुरुदेखि अन्त्यसम्मै छ आभास र आश्माको भूमिका ।
पहिलोपेज : आक्रमक विज्ञापन गरिएका र चलचित्र उद्योगका ठूलाठूला हस्तीहरुले निर्माण र निर्देशन गरेका चलचित्रहरु पनि केही दिनमै हलबाट उत्रिरहेका बेला रेखा थापाका चलचित्रहरु एकपछि अर्को गर्दै दर्शकद्वारा अत्यधिक मन पराइनुका कारण के हुन् ? दर्शक÷स्रोतालाई हलसम्म पुग्न वाध्य पार्ने के त्यस्तो बुटी छ रेखासँग ?
रेखा : हेर्नुस मुभी म रहरले बनाउँदैन । रहरले बनेका मुभी चल्दैनन् । कर्तव्यबोध भएर गम्भीरता साथ बनाइएका मुभी न चल्ने कुरै आउँदैन । विषयवस्तु राम्रो हुनु पर्यो । फिल्मको टिम राम्रो हुनु पर्यो । र, कलाकारको मेहनत कति छ भन्ने हुन्छ ? समय दिन सक्नु पर्यो । कथाबस्तुमा डुब्नु पर्यो । अर्को कुरा, मैले आर्थिक उपार्जन गर्न मुभी बनाउँदैन । मेरो लक्ष्य सन्देश दिनु हुन्छ । र, आयआर्जन भइहाल्यो भने पनि प्रत्यक्ष्य अप्रत्यक्ष रुपमा मैले परोपकारितामा खर्च गर्छु । गर्दै आएकी छु ।
पहिलोपेज : अन्तमा नसोधेका तर भन्न चाहेको कुरा केही छ कि ?
रेखा : धन्यवाद !
रामप्यारीको अफिसियल ट्रेलर यहाँ छ
प्रकाशित मिति : शुक्रवार, चैत्र ०५, २०७२ समय : १६:५१:३० 1499 पटक पढिएको